Ao Bolivia, mihaika ny fetin’ny fahaleovantenan’i Bolivia ny vahoaka tompotany Aymara · Global Voices teny Malagasy
"Tsy maneho ny fahaleovantena ny 6 aogositra ho an'ny Aymara"
Voadika ny 01 Oktobra 2020 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Aymara, Português, 日本語, Français, Ελληνικά, Español
11 Aogositra 2020 tao Achacachi, Bolivia. Antenimieram-paritany Aymara, fantatra amin'ny hoe ‘Ponchos Mena’. Saripikan'i Elias Hilari Quispe, nahazoana alalana.
Ny 6 aogositra no nanamarika ny faha-195 taona ny fahaleovantenan'i Bolivia; nahazo tsikera avy amin'ny mpisera Aymara tompotany amin'ny lazaina ho kolikoly tamin'ny governemanta tetezamita an'i Jeanine Añez sy ny tsi-firaharahiana ny fahasalamana sy ny olana ara-panabeazana ihany koa izany. Maro ihany koa ireo mampiteraka fisalasalana amin'izay mampisongadina ny fetin'ny fahaleovantenan'i Bolivia ho an'ireo vahoaka tompotany ao amin'ny faritra.
Manodidina ny 3 tapitrisa ny vahoaka manondro tena ho Aymara monina amin'ny firenena Andeanina miisa efatra: Bolivia, Però, Chile, ary Arzantina. Ao Bolivia, manodidina ny 62,2 isanjato amin'ny mponina no manondro tena ho tompotany.
Taorian'ny fahaleovantena tamin'ny fitondram-panjanatany espaniola, nitohy ny fihoaram-pahefana nahatra tamin'ny Aymara sy ireo vahoaka tompotany hafa mandrapahatonga ny revolisiona nasionaly tamin'ny taona 1952 raha tontosa tamin'ny alalan'ny tolona ara-piarahamonina ny fahazoan'ny rehetra mifidy sy ny fanajariana ny tany, ankoatra ireo zo hafa. Na eo aza anefa izany, mbola mitohy mandraka androany ny hantsana sy ny fanavakavaham-bolonkoditra mamely ny vahoaka tompotany.
Mifangarika amin'ny fomba fitantaran'ny mpampianatra oniversite tsy tompotany ny fikarohana momba ny tantara(m-bahoaka), teknolojia, fambolena ary fandaminana politika Aymara soratan'ny mpampianatra oniversite Aymara. Tohizan'ny mpitarika sy mpampianatra Aymara ny filazana fa nanafina na nanamaivana ny fahalalàna avy amin'ny firenena Aymara ny Kiriolona (na ny tsy tompotany) ao amin'ireo famoahana azy ireo manokana momba ny tantaran'i Bolivia.
Elias Ajata Rivera, mpahay manokana ny fiteny Aymara, mitantana ny pejy Facebook momba ny fiteny sy ny kolontsaina Aymara “Aymar Yatiqaña” izay izaràny ny tsikera momba ny fankalazana ny fahaleovantenan'i Bolivia:
Pikantsary avy amin'ny pejy Facebook Aymar Yatiqaña.
Ny fivakin'ny sary, “Akanx janiw aka markanakan urupax amtatäkiti ¿KUNATA?” izay midika hoe “Eto amin'ity pejy ity, tsy mankalaza ny fetin'ny fahaleovantena amin'ireo firenena ireo izahay. NAHOANA?”. Nanohy ny filazàny i Ajata:
Satria tsy maneho ny fahaleovantena ho an'ny Aymara ny fahaleovantena ankalazaina any amin'ireo firenena ireo. Mitohy na miharatsy kokoa ho anay aza ny fanararaotana anay.
Manazava i Ajata fa, nandritra ny vanim-potoana aorian'ny fanjanahantany, noterena ny Aymara hiasa ho “pongos” (tompotany mpiasa an-trano na miasa tany), aripaka “eo ampelatanan'ny tompony” ry zareo ary tsy maintsy mandoa “hetra tompotany“. Nanoratra izy:
Tsy nidika fanafahana ho anay Aymara ny fahaleovantenan'ireo firenena ireo. Ho anay, fiovàna “tompo” ihany ilay izy, avy amin'ny fihoaram-pahefan'ny espaniola mankany amin'ny fihoaram-pahefan'ny taranany.
Araka an'i Ajata, derain'ny leson-tantara Boliviana ho mpanafaka ny mpitarika kiriolona tahaka an'i Simón Bolivar sy Antonio José de Sucre; nefa na izany aza, ny fiavontan-tenan'ny vahoaka Aymara amin'izao fotoana dia noho ny mpitarka tompotany toa an'i Tupak Katari, Zarate Willka, ary Santos Marka T’ula. Ry Simón Bolivar, mpanorina ny Repoblikan'i Gran Colombia sy i Bolivia, nihevitra fa ny vahoaka tompotany dia “…mbola tsy mahalala na inona na inona noho ny foko ratsy Spaniarda.”
Any amin'ny fanehoan-kevitra hafa mitsikera ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena boliviana, mpikaroka Aymara Pablo Mamani sy David Quispe nizara izao hafatra manaraka izao tao amin'ny pejiny Facebook:
Tsy afa-miavotena i Bolivia raha tsy misy ny indiana, saovazy, alteños, masistas…
Tsy nampianatra na inona na inona ve ny 195 taonan'ny repoblikan'ny fanjanahantany vaovao?
Ny voambolana “Alteño” dia manondro ny mponin'i El Alto , tanàna iray maro an'isa ny vahoaka Aymara sy Quechua, izay mifampitazana amin'i La Paz. Ny “Masistas” indray no iantsoana mpanjohy ny antoko Hetsika Mankany Amin'ny Sosialisma (MAS) tarihan'i Evo Morales, izay miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina Aymara sy Quechua amin'izao fotoana izay tsy manaiky ny governemanta tetezamitan'i Añez amin'izao fotoana. Nampiasaina tany amin'ny media ireo voambolana ireo hanondroana ny Aymara sy ny Quechuas amin'ny ankapobeny. Mino i Mamani sy i Quispe fa tsy ho izao i Bolivia raha tsy teo ny vahoaka tompotany.
Sasantsasany monja amin'ny fijery mitoha ny hevitry ny “Bolivianity” (“Bolivianidad”) na ny toetra sy ny fihetseham-po amin'ny maha-boloivianina ireo, izay lazain'ny mpitsikera sasany ho mangeja amin'ny kolontsaina hafa ao amin'ny firenena.
Tohanan'ny mpitarika ara-tsosialy sady mpampianatra oniversite Aymara antsoina hoe Felipe Quispe Huanca, fantatra ihany koa amin'ny hoe “El Mallku” (“voromaherin'i Andes”) izany fitsikerana ny maha-bolivianina izany. Nandritra ny adihevitra televiziona iray, nanao fanambaràna matanjaka anoherana ny firafitra ara-politika ny maha-bolivianina izy:
Tsy Boliviana aho … Izaho avy any Qullasuyu, avy amin'ny firenena Aymara … manana ny fiteniko, ny fivavahako, ny zarataniko, ny filozofiako … Tsy tiako ny miaina ambany famoretana.
Nahazo tsikera avy amin'ny politisianina mpandala ny nentin-drazana ireo fanambaràna ireo ary jeren'ny fampitam-baovao izy ho “mpanangana fankahalana eo amin'ny samy Boliviana.” Etsy ankilan'izany, tohanan'ny vahoaka tompotany maro izy.
Ao amin'ny pejiny Facebook manokana, nanazava ny iray amin'ny sojabe lefitry ny Oniversitem-panjakana ao El Alto (UPEA), Qhisphiyir Qhisphi:
Tsy misy na inona na inona tokony ankalazaina amin'ny faha-195 taonan'i Bolivia. Ny famonoana sy ny fandripaham-bahoaka nentin'ny fananiham-bohitra amin'ireo tany 488 taona lasa izay, notaritina nandritra ny fanjanahantany, nampiharina tato anatin'ny repoblika … ary tohizan'ny fanjakana. Mahasahy miteny “fahaleovantena” ry zareo, saingy vahiny no manjaka amin'ny jadona sy ny tsirefesimandidy.